भान्जालाई सार्बजनिक गर भन्दै हजारौ चितवनबासीले सबिताको घर घेरे ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 26, 2021 AdminLeaveaComment on भान्जालाई सार्बजनिक गर भन्दै हजारौ चितवनबासीले सबिताको घर घेरे ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आफ्नै बुहारीमाथि कु दृष्टि लगाएको आ’रोप लागेका ससुरालाई देशव्यापी रुपमा कडा का.रबाहीको माग भइरहेको छ । यद्यपि घ’टना निकै रहस्यमय रहेकाले केस अदालतमा पुगेको छ । सम्मानित अदालतको फैसला आउन बाँकी नै रहेको छ । सबिता भण्डारीको माइतीपक्षले छोरीको ह.त्या भएको हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन ।
यसै बीच घ’टना भएको दिन सबिता भण्डारीको घरमा भएका भान्जालाई घ’टना भएको दिनको बयान दिन सम्बन्धित निकायमा जानु पर्ने चितवनबासिले आवाज उठाउदै आएका छन । भान्जालाई सार्बजनिक गर्न दवाब दिन चितवनबासी तथा महिला अधिकारकर्मीहरु सबिता भण्डारीको घरमा गएर नाराबाजी समेत गरेका छन।